မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) | MoeMaKa Burmese News & Media
Posts Tagged ‘ မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ’
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ဝက်သစ်ချပင်အောက်က မောင် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆ တိုးညှင်းညင်သာတဲ့ တံခါးခေါက်သံနဲ့အတူ လန့်နိုးလာတော့ ရုတ်တရက် ဘယ်ဒေသ ဘယ်အရပ်ရောက်နေမှန်း အသေအ ချာ သဲသဲကွဲကွဲတွေးမရနိုင်သေး။ နောက်ကျိရီဝေနေတဲ့ဥနှောဏ်က...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● (၅၄) မှာ ဆုံကြပြန်ပြီပေါ့ (သို့) သမိုင်းတစ္ဆေရဲ့အရိပ်မည်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၆ မူလအစ ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတပုံကိုတော့ မမေ့လောက်ကောင်းပါရဲ့။ သတိရကောင်းပါရဲ့။ ရာသီဥတုက...
မောင်မောင်လတ် ( ရွှေအင်း လေးစာပေ ) – ပေါင်မုန့် မရှိရင် ကိတ်မုန့် စား (မိုးမခ) ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၆ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူးလေ တနိုင်ငံလုံး အုံးအုံးထ အိုးစည်ဗုံမောင်းနဲ့ ပျော်ရမဲ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ရေးခွင့် ရေးပိုင်ခွင့် ရှိတိုင်း ရေးကြမယ်ဆိုရင် …
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ရေးခွင့် ရေးပိုင်ခွင့် ရှိတိုင်း ရေးကြမယ်ဆိုရင် … (မိုးမခ) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၆ တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန်ဆိုတဲ့စကားရပ်ကနေ ထောင်တန်တဲ့စကား ရီနေရင်ပေါ့ ဆိုတဲ့ အနေအထားရောက်သွားနိုင်သလို ခဏခဏ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● တသွေးတသံတမိန့် (သို့) ကြီးနိုင် ငယ်ညှဉ်း (မိုးမခ) မေ ၁၄၊ ၂၀၁၆ လူသိရှင်ကြားဖြစ်ခဲ့တာမှ မကြာသေး။ ခုထပ်ကြားသိရတာက အပြီးသပ်နိဂုံးချုပ်သွားတဲ့အဖြစ်ပါ။ အရင့်အရင်က ကြားခဲ့ သိ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – လိုက်ခဲ့မှာလား .. နေရစ်ခဲ့မှာလား …. (မိုးမခ) မတ် ၂၂၊ ၂၀၁၆ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့ စကားရပ်အပေါ် ပြည်သူတွေအဖို့ ရင်တဖိုဖို မျှော်တလင့်လင့် အကောင်းမြင်အတွေးတွေနဲ့ ဖြည့်တွေး ဖော့တွေးထားသမျှ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်က တန်းတူညီမျှ
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်က တန်းတူညီမျှ (မိုးမခ) မတ် ၂၊ ၂၀၁၆ အခြေအနေကောင်းနေတုံးက အခြွေအရံတွေ ပတ်လည်ဝန်းရံနေတုန်းက ဆွဲလိုက်တဲ့အစီအမံ၊ အကွက်ချခဲ့တဲ့စီမံကိန်း တွေက ပိပိရိရိ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရေပက်မဝင်အောင် ဒေါင့်စေ့လို့ပါလေ၊...
Saw Ngo (2009) မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – နောက်ဆုံးအပြီးသတ် အဖြေတခု (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၆ တကယ်တော့  ဒီအချိန်ဒီအခါရောက်မှတော့  အရှည်အကျယ်ချဲ့ စရာမရှိ...
A photo released by Yangon police shows black bags of methamphetamine pills spilling out ofacardboard box in...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ဒီအချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး အကောင်းဆုံးပါဘဲ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅ သူရိယနေမင်းကြီးက နေ့တနေ့တာအတွက် မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိ အချိန်ကာလရှည် လုံလောက်သော ၊...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ဥပဒေက နောက်ကြောင်းပြန် မသက်ရောက်စေရ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅ အရင်ကတည်းကကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့ စနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့ အဖျက်အမှောက်၊ အတားအဆီးစီမံချက်တွေ၊ မဟာ ဗျူဟာကျကျ အသုံးချမဲ့ အတွင်းမီး၊ အပြင်မီးတွေထုတ်သုံးမဲ့နေနေသာသာ ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ကျေးဇူးရှင် ဆေးရိုး သယ်ကြီး (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅ ရှေးရှေးက စကားဆိုရိုးတခုကို သတိရမိပါရဲ့။ “ထိုင်နေအကောင်းသား ထသွားမှ ကျိုးမှန်းသိ” ဆိုတာနဲ့ ပြောင်းပြန် ဒီကနေ့...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သမိုင်း၊ သမိုင်းဆိုတာက ကြောက်စရာ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၅ သတင်းစကားစကြားကြားချင်းတော့ ခါတိုင်းလိုသမရိုးကျ၊ သို့လော သို့လော အာရုံ အလွှဲအပြောင်းသတင်း၊ ထွက်ပေါက် စိတ်ဖြေရာသတင်း၏၊ ပုံမှန်ထွက်နေကြ...
မောင်မောင်လတ်(ရွှေအင်းလေးစာပေ) – တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း အပြီး …. (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကနေမဲအများစုအနိုင်ရပါတီက ကျန်ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကို အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွက် သဘောထား ညှိနှိုင်းစကားပြောရမဲ့အစား မဲအပြတ်အသတ်နဲ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – ၅ နာရီထိုးရန် ၁၀ မိနစ်အလို ….. (သို့) တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဆီသို့ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅ တခုသောညနေအချိန်လေး။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့၊...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) မြို့လွိုင်လင်ကို….. သက်သေတည် (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၂၊ ၂၀၁၅ ရှမ်းရိုးမ တောင်တန်းပေါ်ကနေ မနှေး မမြန် စုန်ဆင်း လာတဲ့ ကားတစီးထဲက ရုတ်တရက် သီချင်း တပုဒ်...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သူရဲ့အလိုအတိုင်း မကြာမီလာမည် … မျှော် .. မျှော် …. (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၅ စွဲဆိုထားတဲ့ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ ချမှတ်လိုက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်အတွက်တော့ ထူးထူးထွေထွေ ပြောစရာမရှိ။...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပါ…. (မိုးမခ) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၅ ၂၀၁၄ ခုကတည်းက တိုးတိုးတဖွယ်..ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် တဖုံ.. တီးတိုး တီးတိုး ပေါ်ထွက်လာလိုက် ပျောက်သွား လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခရီးစဉ်တခုက တိုက်ဆိုင်လို့တော့မဟုတ် ...
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) – သတိ … အန္တရာယ်က… လက်တကမ်းမှာ …. (မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၅ ဇာတ်ညွှန်း ဇာတ်ကွက်အရ… အပိုအလိုမရှိ ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်ကပြ အသုံးတော်ခံနေတဲ့ ပြဇာတ်ကလေးက ...